IBizana Pondo Chiefs ithweswe isicoco se-ABC Motsepe League | Scrolla Izindaba
IBizana Pondo Chiefs ithweswe isicoco se-ABC Motsepe League
Iqembu lebhola iBizana Pondo Chiefs lithweswe isicoco se-Champions of the National ABC Motsepe League playoff kulandela ukunqoba ngamagoli amahlanu kwamane emdlalweni wabo ne-Pretoria Callies.
Umdlalo uphele ngo-1-1 ngesikhathi ebesibekiwe ngoMgqibelo e-Vaal University of Technology Stadium.
IBizana Pondo Chiefs izohlomula isigidi samarandi ngokuthweswa isicoco sokuba ngompetha kanti iCallies izohlomula ingxenye yesigidi.
I-ABC Motsepe League iyisigaba sesibili esikhona manje ezigabeni ezintathu zebhola laseNingizimu Afrika.
Omabili lamaqembu iPretoria Callies kanye neBizana Pondo Chiefs bathole ukukhushulelwa kwi-GladAfrica Championship ngoLwesine ngemuva kokunqoba kwabo bedlala neMangaung United naseMvoti ngokulandelana.
IPretoria Callies ibiphethe umdlalo esiwombeni sokuqala kodwa yehluleka ukuguqula amathuba ebiwakhile, uThabiso Nkoana kube nguyena oholele ekulahlekelweni ngamathuba alula.
Umdlalo uye ekhefini amaphuzu eyiqanda kuwona womabili amaqembu.
Esiwombeni sesibili, iCallies iqhubekile nokufaka ingcindezi ethe xaxa emdlalweni wayo neBizana Pondo Chiefs.
Kodwa kube nguInnocent Ngcobo ovulele iBizana Pondo Chiefs amathuba amagoli ngemuva kokuthi uItumeleng Luse engakwazanga ukushaya ibhola ngekhanda, wase ukaputeni washaya igoli lakhe lokuqala lomqhudelwano.
UNalwande “Musona” Natemba ushaye igoli lokulinganisa ngesikhathi esigcwele ukuyisa umdlalo kumaphenalthi. “Siyaziqhenya ngempumelelo yethu njengeqembu, size lapha nohlelo lokukhushulelwa ezikhundleni futhi sikwazile ukukwenza lokho,” kusho uTshepo Motsoeneng weBizana Pondo Chiefs.
UKeorapetse Sebone noThabiso Nkoana bePretoria Callies baklonyeliswe izicoco zokuba abadlali abavelele kanye nemiklomelo yamagoli aphezulu ngokulandelana.
I-GladAfrica Championship ihlelelwe umhla zingama-27 kuLwezi.